K: စိန်ပန်းနဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၁၄)
စိန်ပန်းနဲ့ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ် (၁၄)
Labels: Burma History , friends , personal , short story
စိန်ရတုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်စရောက်တာ။ ပွဲခင်းထဲမှာ မုန့်တွေဝယ်စားရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကို လက်ချောင်းနဲ့ကွယ်တော့ လက်ချောင်းပဲကြည့်ပါမယ်။ မကေလက်တော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး။
မမြင်ဖူးပေမဲ့ တွေးကြည့်တိုင်းပျော်တယ်၊ မတက်ဖူးပေမဲ့ တက်ဖူးသူတွေ ပြန်ပြောပြတိုင်း ရင်ခုန်တယ် တချိန်တော့ အဲ့လိုကျောင်းမျိုး ပြန်ထွက်လာမှာပါ ကျနော့်တို့ တသက်ကော မီပါ့မလားဗျာ
ကေ့ စားပွဲလေးက ချစ်စရာလေး။ လူမျက်နှာလေး ပါရင် ပိုကောင်းမှာ..။
ရှေ့ဆက်ရမှာစိုးလို့ သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့များ ကွေ့ဝိုက် နေသလား စဉ်းစားသွားတယ်။ :)
နည်းနည်းပြန်လေးလာပြီ .. ချိုသင်းပြောသလို
ရှေ့ဆက်ဖို့ တုံ့နေတာလားး))
တာကတော့ မမိုက်ပါဘူးကွာ ...
ဟန်စုယဉ်ဆိုတဲ့ အမကြီးက ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်ကြီးတွေလဲစီးတယ် နော် ကေ
သူ့အရပ် က ပုပုလေး.
မမ တောင် တခါ သူ့ Worker အမြင့်ကြီး ငှားစီးပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခံဖူးတယ်..း)
လက်သဲ ငုပ်စိလေးတွေနဲ့ ကေ့ လက်ကလေးလား ?
တိကျ သေချာ စေ့စပ်မဲ့ လက်ကလေး ပဲ..
(လက်သဲလေး ကြည်ပြီး ဗေဒင် ဟောစမ်း ကြည့်မယ်.း)
မချိုသင်းနဲ့ မနော်ပြောတာ အမှန်ပဲ။
ဒီကနေ့စာမှာတော့ အချက်အလက်တွေအများကြီး တွေ့ရတယ်...
အင်းလျားဆောင်ကို မရောက်ဖူးပေမဲ့ ကေရေးတာဖတ်ပြီးရင်းနှီးနေပြီ။ နှင်းဆီဆောင်မှာတော့ စာသွားကျက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ညအလုပ်ဆင်းမှ အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ရတော့တယ်